( Africa waa qaarada ugu khayraadka badan aduunka , waa qaarada daymaha ugu badan lagu leeyahay , waa qaarada mucaawimada ugu badani ku baxdo ) !! Dhamaadkii qarnigii 18 naad 1884 ayaa wadamada reer galbeedku ku soo duuleen qaarada Africa oo ay qaybsadeen , xiligaasi oo ay qaarada Africa ka […]
Dooda Xulista Xubnaha Cusub ee Komishanku ma Il-duuf sharci baa, Ma dhaar-dusmaa? mise waa Gar-qaadasho la’aan?
Dhacdooyinka siyaasada ee buuqa iyo sawaxanka ka dhaliyey jawiga todobaadyadan Soomaliland, siiba xubnaha cusub ee Komishanka doorashooyinka Qaranka Somaliland waxay noqotay mid mugdi iyo jah-wareer ku riday shacbiga, islamarkaana mindi mindi ka dhigtay madaxdii dalkan masiirkeeda loo aanaynayey. Labada dhinac ( Madaxweyne Biixi iyo Gudoomiyaha Wadani) waxay is dhaafsadeen hadalo […]
Baaq-Nabbadeed oo Ku Socda Waxgaradka iyo Madax-dhaqameedka labbada Beelood ee Ee Ceel-afwayn. Ceel-afwayn waa magaalo sii ooyaysa, waxay maddal iyo hooy u noqtay dhiiga iyo dhiicaan-ka dadka dhalleeyada ah ee isku dhamaaday, waa meel ay isku beerdooxeen Wiil iyo Abtigii, waa goob qarraabo iyo rixim lagu jaray. Dadkaas is wadda […]
November 9, 2019, 11:56 am
Waa wax lagu farxo ifafaallaha nabbadeed ee ka muuqda deggaan-ka Ceel-afwayn, waana darreen qalbiyada wanaagsan ka farxinaaya, waa wax lagu farxo go’aan-ka wanaagsan ee ay qateen madaxda dhaqan-ka ee kasoo jeeda labbada beelood. Colaadda Ceel-afwayn waxay ahayd mid lagu riiqday oo ay dad badani ku dhinteen, kuwo kalena dhawaaca wayni […]
Saaxiibbadii Maalintii adkayd Ee Erdogan. “”Raggii Maalintii Adkayd Difaacay Madaxwayne Erdogan” Afgambigii dhicisoobey ee ka dhacay waddanka turkiga wuxu ahaa maalmo adag oo soo maray shacabka Turkiga iyo dunida islaaamka, waxay ahayd maalmo ay xaaladdu qadhaadhayd oo murugo iyo rajo xumo weyn u ahayd ummada turkiga iyo Caalamka Islaamka oo […]
November 9, 2019, 11:53 am
abeen Axad ah abaaro 8:30 fiidnimo “2-dii bishii October” ayuu Qawdhan Madaxawaynaha iyo Wasiirka Khaarajiga kula caweeyay Qasriga Madaxtooyadda, wasiirka Arrimaha Dibada ayaa ku wargaliyay in lagu daray waftiga madaxwaynaha, Qawdhan waxay u ahayd fursadii ugu qaali-sanayd ee abbid noloshiisa soo marta. waxaana is baddashey shucuurtiisa waana murkii kowaad ee […]
Dalka Jamhuuriyada #Somaliland waa dal nabdoon oo dimuqaradi ah isla markaana kaalin weyn oo muuqata kaga jira nabadgalyada Geeska Africa oo ah gobol ay daashayay maamul xumo , kalitalis , faqri iyo Argagixiso gabood ka soo dhigatay burburka iyo dawlad la’aanta #Somalia. Somaliland oo aan cidi ka caawin ayaa waxa […]
Re: Dhambaal iyo Warqad Ku Socota Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.!
Qoraalkani waa mid nasteexo iyo garnaqsi ah kuna socda hoggaan-ka maanta majarraha u haya qaranka Somaliland ee akhris wanaagsan. Mudane madaxwayne waxaad tahay hogaamiyihii qarran-ka, nagama mudnid cay,canjarfayn iyo hadal qadaf ah Waxaa kor-kaaagga huwan sharftii iyo astaantii qarankeenna. Waxaa dushaada ahaatay karraamo iyo xasaannad, Caydaaddu waxay keeni kartaa cawaaqibo […]
Waa kuma Dr Gaboose Muxuuse ugu suntan yahay shacabka iyo qarankaba?
Dr gaboose waxa u kamid yahay dhakhatiirta ugu waweyn somaliland wana shakhsi umada ka shaqaysta balse aan u shaqaynin, Waxan wada ogsonahay in aragtidiisa lagu bixiyo 50$ o anay awoodeynin shacabka itaalka daran e somaliland, Waxay ahayd inanu umada isaso hortaagine dhiig miirtahiisa iska ahaado shacabkana ka qajilo, Dr gaboose […]
November 7, 2019, 3:22 pm
Dawlad-Deegaanka Soomaalidu Ma noqon doonaa Xuddunta Soomaalida Geeska? W/Q. Yuusuf Garas
Qaybta kowaad : Hordhac: Ummadda Soomaalidu xaggee ayay ka soo jeedaan asal ahaan? Ma Carab ayay ka soo jeedaan? Ma qoomiyadda Oromada ayay ka soo jeedaan? Mise Afrikaan ayay ka soo jeedaan? Jawaabta weyddiimahan, ilaa hadda si rasmi ah looma garan karo, mana jirto jawaab qudh ah oo ay ku […]